Tokes စျေး - အွန်လိုင်း TKS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Tokes (TKS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Tokes (TKS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Tokes ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $692 176.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Tokes တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Tokes များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
TokesTKS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0758TokesTKS သို့ ယူရိုEUR€0.0639TokesTKS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0576TokesTKS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.069TokesTKS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.68TokesTKS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.476TokesTKS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.68TokesTKS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.282TokesTKS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.101TokesTKS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.105TokesTKS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.69TokesTKS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.587TokesTKS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.406TokesTKS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹5.68TokesTKS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.12.78TokesTKS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.104TokesTKS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.114TokesTKS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2.36TokesTKS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.527TokesTKS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥7.99TokesTKS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩89.8TokesTKS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦28.83TokesTKS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽5.56TokesTKS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.1
TokesTKS သို့ BitcoinBTC0.000006 TokesTKS သို့ EthereumETH0.000191 TokesTKS သို့ LitecoinLTC0.00126 TokesTKS သို့ DigitalCashDASH0.000723 TokesTKS သို့ MoneroXMR0.000801 TokesTKS သို့ NxtNXT5.43 TokesTKS သို့ Ethereum ClassicETC0.0105 TokesTKS သို့ DogecoinDOGE21.02 TokesTKS သို့ ZCashZEC0.000753 TokesTKS သို့ BitsharesBTS2.9 TokesTKS သို့ DigiByteDGB2.78 TokesTKS သို့ RippleXRP0.247 TokesTKS သို့ BitcoinDarkBTCD0.00255 TokesTKS သို့ PeerCoinPPC0.265 TokesTKS သို့ CraigsCoinCRAIG33.74 TokesTKS သို့ BitstakeXBS3.16 TokesTKS သို့ PayCoinXPY1.29 TokesTKS သို့ ProsperCoinPRC9.29 TokesTKS သို့ YbCoinYBC0.00004 TokesTKS သို့ DarkKushDANK23.74 TokesTKS သို့ GiveCoinGIVE160.26 TokesTKS သို့ KoboCoinKOBO16.55 TokesTKS သို့ DarkTokenDT0.0698 TokesTKS သို့ CETUS CoinCETI213.68
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 06 Aug 2020 16:45:02 +0000.